Naadiga Chelsea Oo Dabaal Dagay+Sawirro – SBC
Naadiga Chelsea Oo Dabaal Dagay+Sawirro
Waxaa Lagu kala baxay horyaalka dalka Ingiriiska oo kamid ah labada horyaal ugu xiisaha badan adduunka waxaana si rasmi ah u xaqiijisay inay tahay horyaalka Ingiriiska sanadkaan kooxda Chelsea.
Naadiga ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa noqotay horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedka 2014-2015 kadib markii ay 1-0 kaga badisay naadiga Crystal Palace ciyaar ka tirsanayd horyaalka ingiriiska oo ka dhacday garoonka Stamford Bridge.
Goolka ay ku badisay Chelsea ayaa waxaa u dhaliyay laacibkooda Eden Hazard oo daqiiqaddii 45-aad dhaliyay goolka taas oo ka dhigtay Chelsea inay noqoto kooxda chelsea horyaalka ingiriiska ee sanadkaan.
Jose Mourinho ayaa markiisa 3-aad u qaaday horyaalka Ingiriiska kooxda Chelsea isagoo labo jeer hore uu u qaaday markiisa ugu horeeyay uu noqday tababaraha Chelsea halka sanadkaan uu qaaday markiisa 3-aad wuxuuna dib ugu soo laabtay chelsea xilli ciyaareedkii hore.
Chelsea ayaa horyaalkan ay ku guuleysatay ay u noqonaysaa markii 4-aad taariikhda ay horyaalka heerka 1-aad dalka ingiriiska ay qaado waxaana uu sidoo kale noqonayaa shan sannadood kadib oo ay ku guuleysato horyaalka ingiriiska waxaana ugu dambeeysay sanadkii 2010.
Jose Mourinho ayaa horey ugu qaaday kooxda Chelsea labo jeer horyaalka Ingiriiska waxayna kala ahaayeen xilli ciyaareedyadii 2004-05 iyo 2005-06.
Waa horyaalkii 8-aad oo Tababare Jose Mourinho uu qaado 12-kii sannadood ugu dambeeysay wuxuuna la qaaday horyaaladaas kooxaha FC Porto,Chelsea,Inter iyo Real Madrid.
Kooxda Chelsea ayaa 253 maalmood hogaanka horyaalka Ingiriiska heysay xilligaan.
Xilli ciyaareedkii 2005-2006 ayay naadiga Chelsea sidoo kale hogaanka horyaalka ay heysay 257 maalmood halka Manchester utd ay tahay naadiga maalmihii ugu badnaa hogaanka horyaalka ingiriiska heysay hal xilli ciyaaredeed waxayna ahayd xilligii 1993-94 markaas oo ay heysay 262 maalmood hogaanka horyaalka Ingriiiska ee Premier League
Garsoore Kevin Friend ayaa markii uu firimbiga yeeriyay dhamaadka ciyaarta ayaa milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich wuxuu feeray hawada isagoo ku faraxsanaa in naadigiisa ay qaado horyaalka Ingiriiska shan sanno kadib.
Chelsea ayaa afar jeer ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska tan iyo markii Roman Abramovich uu iibsaday Chelsea sanadkii 2003.
Kooxda Chelsea ayaa qaaday Horyaalka ingiriiska sanadihiii 1955, 2005, 2006 iyo 2010.
Daawo Muuqaalka Goolka;